Burma National News - Win Tin
Win Tin	ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ သွားရာလမ်း … တကြောင်းတည်းသော လမ်းတဲ့လား …
မိုးမခ၊ မေ ၂၀၊ ၂၀၁၃
U Win Tin and Questions, 20 May 2013
မြေကြီးကိစ္စ မေ့လျှော့ပေါ့ဆ မလုပ်ကြနဲ့လှုပ်တတ်တယ် ပြိုတတ်တယ် မျိုတတ်တယ် ဒီလှိုင်းဂျာနယ်၊ ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်၊ ၆ မေ ၂၀၁၃ မြေကြီးကိစ္စ မေ့လျှော့ပေါ့ဆ မလုပ်ကြနဲ့
အတိုက်အခံလုပ်စရာ မလိုတော့ဘူး တဲ့လား
U Win Tin and Questions, 15 April 2013
“ဒီမိုကရေစီလမ်းပေါ်လျှောက်နိုင်အောင် ယခင်စစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင်တွေ လုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာလုံးဝလက်မခံပါဘူး”ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ခန့်ခန့်(ဒဿနိက)၊ The Hot News ၊ 18 December 2012
“တရုတ်ကိုကြောက်ရပါတယ်ဆိုတဲ့စကားက ရေရှည်မြန်မာပြည်ကို တရုတ်ကျွန်ဇာတ်သွင်းဖို့လမ်းခင်းနေတာလို့ယူဆရတဲ့ စကားပဲ”ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ခန့်ခန့်(ဒဿနိက)၊ The Hot News ၊4December 2012
* ကျေးဇူးရှင်တွေ ပေါတယ် များတယ် ဆပ်လို့ရယ် ကုန်နိုင်ပါ့မလားကွယ် *
ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်၊ ဒီလှိုင်းဂျာနယ်။ အတွဲ(၁)၊ အမှတ်(၄၆)
ကျေးဇူးရှင်တွေ ပေါတယ် များတယ်
မိုးမခ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၂
U Win Tin and Questions, 25 November 2012
မိုးမခ၊ အောက်တိုဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၂
U Win Tin and Questions, 14 October 2012
New Hell Hounds at large in Burma အရှုပ်ထဲမှာ ရှင်းအောင်နေ
U Win Tin and Questions,2September 2012
U Win Tin and Questions, 28 July 2012
U Win Tin and Questions,3June 2012
သော့ခလောက်ကြီး တန်းလန်းနဲ့ပဲလား ပြီးတော့ ရှေ့ဆက်စရာတွေ (၂) ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ၊ မိုးမခ၊ မေ ၆၊ ၂၀၁၂
U Win Tin and Questions,6May 2012 (2)
သော့ခလောက်ကြီး တန်းလန်းနဲ့ပဲလား ပြီးတော့ ရှေ့ဆက်စရာတွေ (၁) ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ၊ မိုးမခ၊ မေ ၆၊ ၂၀၁၂
U Win Tin and Questions,6May 2012
U Win Tin and Questions, 24 April 2012
U Win Tin and Questions, 10 April 2012
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၊ အမတ်လောင်းများနဲ့ ပြည်သူ့မျှော်လင့်ချက်
ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ၊ မိုးမခ၊ မတ် ၁၃၊ ၂၀၁၂
U Win Tin and Questions, 13 March 2012
ပြည်ထောင်စု၊ လူထုရဲ့ နိုင်ငံရေးရေချိန်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲသို့ သွားရာလမ်း
မိုးမခ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၂
အင်တာဗျူး အပုိုင်း ၁၊ ပြည်ထောင်စု
U Win Tin and Questions, 12 February 2012
မိုးမခ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၂
အင်တာဗျူး အပုိုင်း ၂၊ လူထုရဲ့ နိုင်ငံရေး ရေချိန်
U Win Tin and Questions, 13 February 2012
ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ ပြည်ထောင်စု၊ လူထုရဲ့ နိုင်ငံရေးရေချိန်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲသို့ သွားရာလမ်း မိုးမခ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၂ အင်တာဗျူး အပုိုင်း ၃၊ ရွေးကောက်ပွဲသို့ သွားရာလမ်း
U Win Tin and Questions, 14 February 2012
လွှတ်တော်ထဲဝင်ကြရမယ့်အချိန်၊ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာရေး
မိုးမခ၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၂
U Win Tin and Questions, 23 January 2012
U Win Tin and Questions, 29 December 2011
သမဂ္ဂစိတ်ဓာတ်နဲ့ အလုပ်တာဝန်တွေ မျိုးဆက်သစ်တွေဆီ လက်ဆင့်ကမ်းဖို့
U Win Tin and Questions, 23 December 2011
တင်ရေး၊ ၀င်ရေး၊ ပြင်ရေး၊ ထူထောင်ရေး (NLD နဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်)
မိုးမခ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၁
U Win Tin and Questions, 15 December 2011
အကောင်းမြင်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီလား ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ၊ မိုးမခ၊ ဒီဇင်ဘာ ၆၊ ၂၀၁၁
U Win Tin and Questions,6December 2011
U Win Tin and Questions, 29 November 2011
စွန့်လွှတ် စွန့်စားရမယ့် စိန်ခေါ်မှုဆီသို့
ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ၊ မိုးမခ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၁
U Win Tin and Questions, 21 November 2011
U Win Tin and Questions, 15 November 2011
ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ၊ မိုးမခ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၁
U Win Tin and Questions, 10 November 2011
ထွန်းထွန်း | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၀၉ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သော ဦးဝင်းတင်အား ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကဲ့သို့ပင် တိုင်းပြည်အတွက် အနစ်နာခံ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟုဆိုကာ ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မကွေး ပရိယတ္တိကျောင်းတိုက် ဆရာတော်မှ “သူရသတ္တိ” ရွှေတံဆိပ်ဆု ပေးအပ်မည်ဟု သိရသည်။
Gold Medal,9November 2011
U Win Tin and Questions,2November 2011
U Win Tin and Questions, 26 October 2011
နိုင်ငံရေးဘ၀တွေ ပြန်လည်ထူထောင်ကြဖို့ အချိန်ရောက်ပြီ
မိုးမခ၊ အောက်တိုဘာ ၁၉ ၊ ၂၀၁၁
U Win Tin and Questions, 19 October 2011
မှတ်ပုံတင်မရှိတဲ့ ပါတီ – အင်န်အယ်ဒီ
မိုးမခ၊ အောက်တိုဘာ ၂၊ ၂၀၁၁
U Win Tin and Questions,2October 2011
U Win Tin and Questions, 21 September 2011
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အိမ်ပြန်မရောက်ခင် ပြည်ပကလူတွေ အရင်ပြန်ကြမှတဲ့လား
မိုးမခ၊ စက်တင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၁
U Win Tin and Questions, 13 September 2011
စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့ က နေပြည်တော်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ ၀န်ကြီး ၅ ဦးရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ တွေ့ဆုံရာမှာ ဦးဇော်မင်းက အခုလို ပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ "အခုလအတွင်း တလလောက်အတွင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဧရာဝတီ ရောဂါပေါ့၊ ဧရာဝတီ ရောဂါနဲ့ အမှီလိုက်နေတဲ့ သူများရဲ့ မေးခွန်းတွေ၊ ကာတွန်းတွေပေါ့။ အဲဒီတော့ အခု ဧရာဝတီမြစ်ဆုံရဲ့ စီမံကိန်းများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မဲ့ အစီအစဉ် ရှိပါသလား၊ ဘယ်အဆင့်အထိ ရောက်နေသလဲလို့ မေးပါတယ်။ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ စီမံကိန်း ဆက်လုပ်ပါမယ်။ ကျနော်တို့ ဘယ်တော့မှ နောက်မဆုတ်ပါဘူး။" မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက် ပျက်စီးမှု ရှိမရှိ အတွက် အစိုးရက ကုမ္ပဏီ တစ်ခုကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁.၂၅သန်း နဲ့ ငှားရမ်းပြီး သုတေသန လုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ ကြိုတင် တွက်ဆမှု အတွက် အချိန် ၃ နှစ်ခန့် ယူခဲ့ကြောင်း ၀န်ကြီးက ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးဇော်မင်း ပြောဆိုလိုက်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြည်တွင်းပြည်ပက ဝေဖန်ရှုံ့ချတာတွေလည်း တဆက်ထဲ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ NLD ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်၊ အမျိုးသား လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာအေးမောင်၊ သတင်းစာဆရာ မောင်ဝံသနဲ့ ကချင် လူမှုရေး လှုပ်ရှားသူ ဒေါ်ဘောက်ဂျာတို့ကို ဆက်သွယ်ပြီး မခင်ခင်အိ စုစည်း တင်ပြထားတာကိုလည်း နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
အာဏာရှင်စိတ်ဓာတ်တွေအလွှာတိုင်းက စွန့်လွှတ်ဖို့ လိုတယ်
မိုးမခ၊စက်တင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၁
U Win Tin and Questions, 11 September 2011
မိုးမခ၊ သြဂုတ် ၂၆၊ ၂၀၁၁
U Win Tin and Questions, 26 August 2011
ဦးဝင်းတင်နဲ့ အင်တာဗျူး မိုးမခ၊ သြဂုတ် ၁၇၊ ၂၀၁၁
"အခုတကြိမ်မှာကျတော့ သူတို့ဖက်က သုံးနှုံးတဲ့ စကားလုံး ကိုယ်တိုင်မှာ နိုင်ငံရေး တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုလို့ သုံးစွဲလာတယ်။ ဒါက ဘာပြသလဲဆိုတော့ သူတို့အစိုးရဖက်မှာကို ကွဲပြားတဲ့ သဘောထား ၂ရပ် ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရတယ်" U Win Tin and Questions, 17 August 2011
U Win Tin and Questions, 31 July 2011
U Win Tin and Questions, 25 July 2011
NLD leader Win Tin allowed to republish his books after 33 years Thursday, 14 July 2011 20:56 Mizzima News U Win Tin Interview Mizzima, 14 July 2011
ပြည်တွင်းစစ်၊ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် နဲ့ ဒေါ်လာဈေး
U Win Tin and Questions, 15 June 2011
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အားလုံးလွတ်မြောက်ရေး လူထုအားလုံး၏ ဦးစားပေးအရေး
မိုးမခ၊ ဧပြီ ၁၂၊ ၂၀၁၁
U Win Tin and Questions, 12 April 2011
မတရားတဲ့ ဥပဒေတွေကို ပြင်ဆင်ဖို့ လိုအပ် BurmaVJMedia | Published on May 17, 2013မတရားတဲ့ဥပဒေကို ကျင့်သုံးပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ဗိုလ်ကြီးဟောင်း နေမျိုးဇင်ကို ပုဒ်မ ၄၀၁ (ခ) အရ ထောင်ကြွေးကျန်များကို ပူးပေါင်းပြီး ထောင်ဒဏ်ကျခံစေခဲ့သလို အခြားသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုလဲ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်တဲ့အတွက် အဆိုပါ မတရားတဲ့ ဥပဒေတွေကို ဖျက်သိမ်းဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ၀ါရင့်သတင်းစာဆရာကြီး ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်က ဘားမားဗီဂျေမီဒီယာကို ပြောကြားပါတယ်။https://www.youtube.com/watch?v=alcx5zGfRsM
သမိုင်းအမှန်မှာ အရိုးတွန်သံတွေ ကြားရမယ်BurmaVJMedia | Published on May 16, 2013 / Lin Aunghttps://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1ChkiA10ZhA#!
FRANCE 24 The Interview : THE INTERVIEW - Win Tin, co-founder of the Nationalfrance24english ၊ Published on Apr 15, 2013https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jNMm0SnyuRs#!
U Win Tin's 82nd Birthday (Uploaded by mizzimanewsTV on Mar 12, 2012)http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4ppg4qaS1TE
NLD 23rd Anniversary - U Win Tin (Uploaded by nldburma on Sep 28, 2011) http://www.youtube.com/watch?v=69K2pZSoec8
2010 Political Review - U Win Tin (Uploaded by DVBBurmese on Jan 10, 2011)http://www.youtube.com/watch?v=Fp6AmH_I9mc
Madeleine K AlbrightAye Tha AungLaura BushJoseph CrowleyGambiraKo Ko GyiJack HealeyAung San Suu KyiMin Ko NaingThura Tin OoThakin Thein PeTomas Ojea QuintanaDagon TaryarPu Cin Sian ThangWin TinDesmond TutuZarganar	Copyright © 2011 Burma National NewsInformation is Power